musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » misangano » IMEX America Kunyoresa Kunoratidza Kwakanaka Kuwedzera
Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Mwedzi mumwe chete mushure mekunyoreswa kwakaenda kunoraramira IMEX America muLas Vegas munaNovember, yakapihwa mutengi kudiwa kwakakwira kupfuura zvazvaive panguva imwechete mu2019, yaive rekodhi.
Rudzi rwepasi rese rwevaratidziri vari kuitirana svondo pavhiki uye vanosvika zvikamu zvese zveindasitiri asi kunyanya North America.
IMEX America yakagadzirirwa kuita basa rakakosha mukuenda bhizinesi kupora.
Chiitiko ichi chinoitika munaNovember 9-11 kuMandalay Bay muLas Vegas, Nevada.
“Kunyoresa kwevatengi kuri kukurumidza kuwanda nevatengi vakagamuchirwa vachinyoresa vari vazhinji. Kune humwe hunyoro hwakafanana pakati pevaratidziri zvakare, zvinowedzera kumusoro kwakanaka mukumhanya kuchirongwa chedu chiripo, IMEX America. ” Ray Bloom, sachigaro weIMEX Group, inogamuchira kuwedzera kwekunyoresa pamberi pechiratidziro munaNovember.
Pamwe chete nevatengi, nyika dzepasi rose dzevaratidziri vari kubvumirana svondo nevhiki uye vanofamba zvikamu zvese zveindasitiri asi kunyanya North America. Zvinosanganisira nzvimbo dzakadai seCanada, Italy, Boston, Atlanta, Argentina, Hawaii nePuerto Rico; pamwe chete nemapoka ehotera Makore mana, Wyndham Hotel Boka, Mandarin Oriental Hotel Boka uye Yakabatana Luxury Hotera International.
Ray Bloom anoenderera mberi achiti: “Tataura nevatengi vedu nevaratidziri tinoziva kuti IMEX America yakagadzirira kuita basa rakakosha mukugadzirisa bhizinesi ravo pamwe nekupa zvikwata zvavo mukana wekubatanazve mushure megore rakaoma. Chikwata chedu chakabatikana kushanda kuseri kweshure kuendesa shoo izere nenguva dzisingakanganwike pamwe nemikana mikuru yekuita bhizinesi rinotsigira ese edu maratidziro. ”
IMEX America inoitika munaNovember 9-11 kuMandalay Bay muLas Vegas ne Smart Muvhuro, Inofambiswa neMPI, munaNovember 8. Kunyoresa - mahara - tinya pano.